Moa ve namana sy mpifaninana amin'ny sehatra ny rindrambaiko an-tserasera? | Martech Zone
Nisy namako iray nangataka tamiko mba hamerina hijery ny sehatr'izy ireo amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo amin'ity herinandro ity, izay milaza fa ny tranokala dia mitondra fivezivezena betsaka amin'ireo mpivarotra hafa ao amin'ny indostria. Nanao famakafakana haingana ny tranokala lahatahiry aho ary marina izany, nahazo laharana marim-pototra tamin'ny indostrian'ny namako ry zareo. Toa lojika ihany raha tokony hangataka fanamarihana izy ireo mba hahitana tsara kokoa ao amin'ny lahatahiry.
Tsy tranokala kely ny lahatahiry, goavambe. Izy io dia manana filaharana milina fikarohana lehibe, mpiasa fampandrosoana, fifampiraharahana amin'ny haino aman-jery sosialy, ary teti-bola ara-barotra mihitsy aza. Satria mavesatra loatra ny fifamoivoizany ary afaka mitondra mpijery mifandraika be dia be amin'ny sehatra izy io, manana rafitra dokam-barotra ao anatiny koa izy io izay ahafahan'ny namako mividy mombamomba miavaka kokoa na mampiseho doka amin'ny pejy mifandraika.
Inona ny dia lavitra?
Ny lahatahiry dia hita ao amin'ny motera fikarohana ho an'ny teny lakile mifandraika mifandraika amin'ilay sehatra.
Ny mpampiasa ny motera fikarohana dia mikitika ny lahatahiry izay ahitan'izy ireo ny sehatra misy anao mifaninana amin'ny fifaninanana rehetra anananao.
Mpampiasa motera fikarohana vitsivitsy no miditra amin'ny orinasanao. Betsaka ny very amin'ireo mpifaninana aminao, indrindra raha manana teti-bola dokam-barotra lehibe kokoa izy ireo ao anatin'ny lahatahiry.
Ity ny olana amin'ity dia ity… tsy naman'ny lampihazo io fa mpifaninana amin'izy ireo. Ny sehatra dia minia mampijanona ny vinavinanao, mamily azy ireo mankamin'ny tranonkalany, mba hahazoam-bola any ny mpanatrika. Mampiroborobo ny lahatahiry ho an'ny mpampiasa anao ianao hametraha hevitra - izay ataon'izy ireo - izay manatsara ny laharan'ny fikarohana ao amin'ny lahatahiry. Amin'izay fotoana izay, dia mihodina lavitra eo aminao sy ny vinavinanao izy io. Miankina amin'ny lahatahiry hamelomana ny orinasanao izao ianao.
Inona no safidy hafa?
Manangana fisian-tserasera matanjaka ianao, milahatra tsara noho ny lahatahiry.
Tsy miraharaha ny lahatahiry ny Prospect ary mandeha mivantana amin'ny atiny, tsy nanolotra ny fifaninanana velively.
Ny atiny misy ifandraisany sy maharesy lahatra dia mitaona ny mpitsidika ho tonga mpitarika, mitarika mpanjifa.
Ity lahatahiry ity dia tsy manana vintana tsara kokoa handresy anao amin'ny valin'ny motera fikarohana noho ianao, nahoana ianao no manampy azy ireo? Maninona ianao no mandoa azy ireo, manohana ny tranonkalany, ary mandritra izany fotoana izany dia manampy ny mpifaninana aminao izy ireo? Tahaka ny olona iray mitsangana eo alohan'ny fivarotana anao, mitsidika ny vinavinany manodidina ny sakana amin'ireo mpifaninana aminao, ary avy eo mangataka anao handoa azy ireo mba hahazoana antoka fa averin'izy ireo any amin'ny magazinao. Horoahinao hiala eo am-baravaranao izy ireo, sa tsy izany?
Tokony hijery izay loharanon-karena biolojika ianao na ho namana na mpifaninana. Mazava ho azy, mety hanana fotoana izy ireo hitarika fifamoivoizana tsy mampino ho anao. Fa vola aloanao izany. Mila mamantatra ianao na mety na tsia amin'izany fiankinan-doha izany ary vonona ny hanohy handoa ny fidirana mankany ny mpihaino.
Tsy hanao izany aho. Ary tsy nanoratra ny famerenana ny lampihazon'ny namako aho.
Tags: Directorieslahatahiry fampiharana amin'ny Internetlahatahiry saas an-tseraseralahatahiry sehatralahatahiry rindrambaiko
Ireo fomba 5 ambony hanatsarana ny fizotran'ny fandoavanao finday
Antontan'isa: Ny fitomboan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa haino aman-jery sosialy